Maxaa Isku Keenay Bollywood Actor Ali Fazal Iyo Paris Jackson Heesaagii Caanka Ahaa Michael Jackosn Gabadhiisa - iftineducation.com
iftineducation.com – Bollywood Actor Ali Fazal oo sidoo kale mararka qaar sameeyo filimada Hollywood-ka ah ayaa la arkay inay beryahan isku badan yihiin Paris Jackson oo ah gabadha uu dhalay heesaagii caanka ahaa Michaeal Jackson.
Ali Fazal todobaadkan oo dhan wuxuu ku sugnaa magaalada Los Angeles si uu u saxiixdo filimo caalami ah wuxuuna halkaas kula kulmay filim sameeyayaal Hollywood ah iyo Paris Jackson.
Sidoo kale kulanka Ali Fazal iyo Paris Jackson waxaa goob joogu u ahayd atirishada Richa Chadha oo Bollywood-ka ka tirsan sidoo kalena dalka Mareekanka u tagtay soo bandhigida filimkeeda ugu horeeyay ee Hollywood ah Love Sonia.
Waxaa la sheegay in Ali Fazal iyo Richa Chadha ay kala hadleen Paris Jackson sidii ay u wada sameyn lahaayeen Album Muusig caalami ah kaasi oo dunida dhan ka wada gadmi karo.
Ali Fazal wuxuu muuqaal marti ah ku yeeshay filimkii weynaa ee Hollywood-ka ahaa Fast & Furious 7, haatana wuxuu soo wadaa filim uu door dhameestiran ku leeyahay ee lagu magacaabo Victoria and Abdul wuxuuna la jilaa ruug cadaaga weyn Dame Judi Dench.
Ali Fazal hawlihiisa Bollywood-ka waxaa ka mid ah in sanadkii hore u guuleestay filimkii Happy Bhaag Jayegi ee uu la jilay Diany Penty, Abhay Deol iyo Jimmy Shergil haatana wuxuu duubis ku wadaa filimka Fukrey 2 oo la daawan doono bisha December ee dabyaaqada sanadkaan.
Quruxda gabdhaha soomaaliyeed waa top